အမျိုးသားဇာတ်ရုံ (မန္တလေး)ကို ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးရန် တင်ဒါခေါ်ယူ - Yangon Media Group
အမျိုးသားဇာတ်ရုံ (မန္တလေး)ကို ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးရန် တင်ဒါခေါ်ယူ
မန္တလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၃ဝ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးအောင်မြေ သာစံမြို့နယ်ရှိ အမျိုးသားဇာတ်ရုံကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးနိုင်ရန် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ အနုပညာဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါခေါ်ယူထားကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော့်ကို ဒီတင်ဒါခေါ်ဖို့အတွက် နေပြည်တော်က တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားတာပါ။ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က မဟုတ်ပါဘူး။ ငှားရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိပါဘူး။ တင်ဒါခေါ်ဖို့ ညွှန်ကြားလို့ ကျွန် တော်က တင်ဒါခေါ်တာပါ။ ဒီလိုမျိုး ပုဂ္ဂလိကတင်ဒါခေါ်တာဒါပထမဆုံ အကြိမ်ပါပဲ။ ရန်ကုန်က အမျိုးသားဇာတ်ရုံကိုတော့ ဒီလိုတင်ဒါခေါ်တယ်လို့တော့ မကြားမိသေးဘူး။ မန္တလေးပဲ ခေါ်တာလို့သိရတယ်”ဟု အမျိုးသားဇာတ်ရုံ (မန္တလေး)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
တင်ဒါခေါ်ထားသည်များမှာ အနုပညာဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသားဇာတ်ရုံ (မန္တလေး)မှ လက်ရှိအခြေ အနေအတိုင်း၊ အနုပညာဦးစီးဌာန၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပုကျောင်း(မန္တလေး)၏ အရှေ့ဘက်မျက်နှာစာတွင် တည်ရှိသည့် အလျား ၁၅၉ ပေ၊ အနံ ၃၂ ပေအကျယ်ရှိ မြေနေရာလက်ရှိ အခြေအနေအတိုင်းတို့ကို ငှားရမ်း ခြင်းများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
တင်ဒါခေါ်ရာတွင် အမျိုးသားဇာတ်ရုံ(မန္တလေး)အတွက် တင်ဒါတစ်စောင်လျှင် ကျပ်တစ်သောင်းနှင့် မြေနေရာအတွက် တင်ဒါတစ် စောင်လျှင် ကျပ်နှစ်ထောင်နှုန်း သတ်မှတ်ထားပြီး နိုဝင်ဘာပထမအပတ်မှ စတင်ရောင်းချလျက်ရှိကာ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဇာတ်ရုံ(မန္တလေး) ကို ပုဂ္ဂလိကသို့တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာ ငှားရမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ငှားရမ်းခွင့် ရရှိသူအနေဖြင့် ပွဲငှားခြင်းများကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ပွဲမိန့် ဖြင့်ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ကာ ငှားရမ်းခ ဈေးနှုန်းကိုလည်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ် နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းခွဲများတွင် ကျောင်းအုပ် ရာထူးနေရာ ၁၂ဝဝ ခန့် လစ်လပ်နေ
အောင်စိုးမိုးကျော် ရေယာဉ်နစ်မြုပ်မှုမှ ပျောက်ဆုံးသူ ၁၈ ဦးအတွက် အာမခံကြေး ပေးနိုင်ရန်စီစဥ??
တောင်တရုတ်ပင်လယ် မုန်တိုင်းငယ်များ၏ ကြွင်းကျန် တိမ်တိုက်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဒေသအချ??
စပါးတင်းတစ်ရာအတွက် အခြေခံဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်က ယခုလအ?
ကတ်ထရီနာ မုန်တိုင်းကြောင့် ကလေးများမွေးစားရန် ဆန်ဒရာဘူးလော့ခ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့
ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံ မီးလောင်မှု ငြှိမ်းသတ်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံမှ Bio Foam A ပီပါများ ဒုတိယအသုတ် ဂါလန် ၅??